musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Rail Kufamba » Chitima chitsva chemutengo wakaderera kubva kuLondon kuenda kuElinburgh
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • Scotland Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Chitima chitsva chemutengo wakaderera kubva kuLondon kuenda kuElinburgh chinogona kukanganisa njanji dzanhasi nemasevhisi emhepo
Ongororo ichangobva kuitwa yakaratidza kuti 11% yevakabvunzwa pasi rese iye zvino vane bhajeti rezororo rakadzikira pane pre-COVID, uye 37% havakwanise kuenda kuzororo munguva pfupi iri kutevera kuitira kuti basa idzva remutengo wakaderera ritambwe.
Kutanga kwaLumo kwakachipa mutengo kunosangana nebhajeti uye kunetsekana kwezvakatipoteredza.
Lumo yemhando yepasi-inodhura njanji sevhisi modhi inogona kuve inozivikanwa kwazvo kune vafambi.
Kunyangwe iyo sevhisi iri yakachipa-mutengo, yemahara Wi-Fi, uye pane-inoda varaidzo ichave ichiwanikwa kune vese.
Kuvhurwa kwaLumo kwemitero yezvitima zvakachipa kunogona kukanganisa ikozvino njanji uye masevhisi emhepo pakati peLondon neElinburgh. Yayo yakachipa-inodhura modhi padhuze nekutarisa kudzikisira kukanganisa kwezvakatipoteredza ichagara zvakanaka pakushandura mafambiro mafambiro sezvo chikamu chinopora kubva padenda.
Lumo's isingadhuri njanji sevhisi inogona kuve inozivikanwa. Vafambi veBritish vajaira kukwira mitengo uye nemitengo yepasi iyo, pre-COVID, yaive yakawandisa vanhu. Kuvhurwa kwenzira itsva yemubhadhari webhajeti pakati peElinburgh neLondon kunofanirwa kunge kuri kukanganisa nekuda kwekushomeka kwemakwikwi pakati pevashandi vezvitima mu UK. Kunyangwe iri yakaderera-mutengo, yemahara Wi-Fi, uye pane-inoda varaidzo ichave ichiwanikwa kune vese. Nenguva dzekufamba maminetsi gumi chete kupfuura iyo iripo LNER, Lumo akagadzwa zvakanaka kuti awane pfuma mumusika wemakwikwi.
Nemabhajeti akatambanudzwa, kuiswa kwechitima chemutengo wakaderera kuchatamba zvakanaka nevatambi vakasungwa nemari apo kudiwa kwemumba kuchikwira muUK. Mitengo yakaderera ichave yakakosha kupindura kune yakawedzera mutengo kunzwisisika kwevafambi. Vazhinji vakanzwa kuruma kwemari kubva padenda iri zvichikonzera kuomesa mabhajeti emumba nekufamba. Zvimwechetezvo, zvakawanikwa mu2021 Consumer Survey zvakaratidza kuti 62% yevakabvunzwa vekuUK vaive 'zvakanyanya', 'zvishoma', kana 'chaizvo' vane hanya nemamiriro avo emari, zvichisimbisa kudiwa kwemasevhisi emitengo yakaderera.
Kukwikwidza kwaLumo £ 15 (US $ 20.78) nzira imwe-chete yakaderera mari yekutengesa inogona kukurudzira kudiwa kwekufamba pakati peLondon ne Edinburgh. Mitengo yakaderera inoiswa kuve yakachipa pane yekudhura-inodhura ndege uye inogona kuisa kukwikwidza kumanikidza paJetJet uye, kune imwe nhanho, British Airways. Mutengo ndiyo kiyi yekukwezva tsika panguva yeCOVID-19 yekudzosa nhanho, uye Lumo ane rakakodzera bhizinesi modhi yekubudirira.
Vafambi vari kuwedzera mukana wekufurirwa neyakagadzikana nharaunda chigadzirwa kana sevhisi. Ongororo yevatengi yeQ1 2021 yakaratidza kuti 70% ye UK vapindura 'nguva dzose', 'kazhinji', kana 'dzimwe nguva' vanokurudzirwa nechinhu ichi.
Kutarisisa kwakanyanya kwaLumo pakuve mashandiro ane nharaunda, humbowo hweramangwana modhi yayo yebhizinesi. Vafambi vanowanzo bhururuka pakati pemaguta maviri aya vangangodzungirirwa kuenda kune yakasarudzika nharaunda uye yakachipa sarudzo. Kusarudza kufamba pazvitima zvemagetsi zvakakwana zveLumo pamusoro pekubhururuka kunoderedza kuburitswa kwekabhoni yerwendo kuenda kune chimwe-chechitanhatu chekubhururuka, sekureva kweanoshanda. Kuenderera mberi ichisimbisa kutarisisa kwayo kwezvakatipoteredza, anoshanda anozopa 50% yezvirimwa-zvinodyiwa pabhodhi uye iri 100% yedhijitari kudzivirira mapepa. Nekunetsekana kwezvakatipoteredza kwakatarwa kukura, kufamba kwacho kwaigona kuona Lumo achive anotungamira nharaunda anoziva njanji anoshanda.
Mhirizhonga Yemhirizhonga Inopararira muParis Pamusoro Pemvumo yeCVVID ...
Air Astana Inodzokera Kubatsiro
17 vanhu vakakuvadzwa muLos Angeles bhomba kuputika kwetiraki